Uvavanyo lweSiza lukhokelela kuNguquko kulonwabo | Martech Zone
Ngaphandle kovavanyo lokukhangela, isantya kunye nentlalontle, kukho izinto ezibalulekileyo kwindawo yovavanyo ekufuneka inkampani yakho isebenza kuyo ihlalutye zitshintshwa njani iindwendwe zibe ngabathengi. Izinto ezikumaphepha anje ngamaqhosha okubizela isenzo, ubeko, ukukhangela, ikopi, ukukhushulwa, ukunikezelwa, inkqubo yokuphuma, inkqubo yokukhetha imveliso kunye nokukhuseleka kufuneka kuvavanywe rhoqo ukufumana imiba kunye nokuphucula ukusebenza kwephepha lakho lokufika okanye iphepha le-ecommerce .
Iinkampani ezonwabileyo ngamaxabiso azo okuguqula zenza, ngokomndilili, Iipesenti ezingama-40 ngaphezulu iimvavanyo kunalezo ezingonwabanga.
Luhlobo olunomdla oluvela kwi-infographic evela kwi-Monetate, Ngaba Uqhuba iimvavanyo ezaneleyo kwiWebhusayithi yakho?. Ndiyazibuza ukuba bayavuya na kuba beqonda, ngokuvavanya, ukuba balindele ntoni ekusebenzeni kokuguqula. Umntu ongaluvavanyiyo ngekhe azi.
Kunye nolu vavanyo, ndingacebisa ukuvavanywa kwephepha. Ukukhawuleza kuyinto ebalulekileyo ekuguqulweni nasekukhangekeni. Ndiyakuthanda ukusebenzisa Isixhobo sikaPingdom sokuvavanya isantya sephepha.
tags: vavanyoukuvavanywa kwezinto ezininziukuvavanya iphephaUvavanyo lwewebhusayithi